Home Wararka Fahad Yasin oo amray in xilka laga qaado Taliyihii Booliiska Degmada Jowhar
Fahad Yasin oo amray in xilka laga qaado Taliyihii Booliiska Degmada Jowhar
Taliyaha Ciidamada Booliska Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa xil ka qaadis ku sameeyay talihihii saldhiga Booliska degmada jowhar, isagoo u magacaabay taliye cusub.
MOL ayaa loo xaqiijiyay in xil ka qaadista uu amray Fahad Yasin Agaasimaha NISA kaddib markii guri uu kireysan rabay Fahad magaalada Jowhar loo diiday kaddibna ku amray Taliyaha xilka laga qaaday in uu soo xiro milkiilaha gurigaas oo sheegay in aanu gurigiisa ahayn kiro. Kabtan Canjeex ayaa ka biyo diiday amarka Fahad Yasin, taasoo keentay in maanta xilka laga qaado.
Taliyihii Saldhigga Booliska Jowhar Kabtan Maxamed Siyaad Cali (Canjeex), isaga oo u bedelay ururka Taliska Booliska, waxaana wareegto kasoo baxday Xafiska Taliyaha Booliska xilka Taliyaha Saldhiga Booliska Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hir-Shabeellle loogu magacaabay Gaashaanle Dhexe Bashiir Xasan Xalfooy.
Taliyeyaasha hoggaanka Ciidanka booliska degaannada Hir-Shabeelle ayaa waxaa la faray inay la socdaan xilka qaadista iyo magacaabista taliyeyaasha, isla markaana ay la Shaqeeyaan Taliyaha Cusub.
Taliska ciidamada Booliska federaalka ayaa si toos ah weli gacanta ugula jir oo magacaaba taliyeyaasha ciidamada Booliska maamul Goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo K/Galbeed, waxaana ka madax bannaan oo taliyeyaashooda magacawda maamul Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.